Coggle: Mfe, Mkpokọta Imekọrịta Ihe Mchọpụta Imekọrịta | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 22, 2018 Mọnde, Jenụwarị 22, 2018 Douglas Karr
N'ụtụtụ a, mụ na Miri Qualfi nọ na oku Ndị na -agba bọọlụ o wepụtala echiche ụfọdụ maka ọbịbịa Ajụjụ Ọnụ Martech pọdkastị na Snapchat. Ngwaọrụ o mepere dị egwu - Igwe mmiri.
Igwe mmiri bụ ngwa dị n'ịntanetị maka imepụta na ịkesa maapụ uche. Ọ na-arụ ọrụ n'ịntanetị na ihe nchọgharị gị: ọ nweghị ihe ibudata ma ọ bụ wụnye. Ma ị na-ede ihe, na-atụgharị uche, na-eme atụmatụ, ma ọ bụ na-eme ihe dị egwu, ọ dị oke mfe iji anya nke uche gị hụ echiche gị Igwe mmiri. Ekekọrịta uche gị map, flowchart, ma ọ bụ eserese na ọtụtụ ndị enyi ma ọ bụ ndị ọrụ ibe dị ka ị chọrọ. Mgbanwe ị mere ga-egosi ozugbo na ihe nchọgharị ha, ebe ọ bụla ha nọ.
Nke a bụ vidiyo mmeghe yana nyocha nke ịgbakwunye eserese mbụ gị:
Njirimara nke Coggle's Mind Map Solution:
Mmekọrịta oge ozugbo - Kpọọ ndị ọrụ ibe gị ka gị na ha rụọ ọrụ, n’otu oge, na eserese gị.
Zọpụta mgbanwe ọ bụla - Lelee anya na mgbanwe niile na eserese ma mepụta otu ọ bụla site na isi okwu ọ bụla iji laghachi na nsụgharị gara aga.
Unlimited Image bulite - Dọkpụrụ-na-dobe onyonyo site na desktọpụ gị gaa na eserese gị. E nweghị ịgba na ọnụ ọgụgụ nke ihe oyiyi ị nwere ike itinye.
Tinye sere n'elu Text na Images - Tinye ederede ederede na onyonyo ndị na-abụghị akụkụ nke eserese eserese iji kọwaa akụkụ nke maapụ gị.
Ndenye ego akwụ ụgwọ na-enyekwara atụmatụ ndị a:
Unlimited Onwe Eserese - Mepụta ọtụtụ eserese nkeonwe dị ka ịchọrọ. Ọ bụrụ n'ịkagbu ndenye aha gị, ha ga-anọ naanị gị, ị ga-enwerịrị ohere.
Mepụta Loops ma sonye alaka - Jikọọ alaka ma mepụta loops iji mepụta eserese dị ike ma na-agbanwe agbanwe nke na-anọchite usoro usoro na ihe ndị ọzọ dị elu.
Mmekọrịta Mba-Mbido - Ekwe ka ọnụọgụ mmadụ ọ bụla dezie eserese naanị site na isoro ha kerịta njikọ nzuzo. Enweghị nbanye chọrọ.
Otutu Malite Points - Tinye otutu ihe dị na eserese gị ka eserese isiokwu ndị metụtara ya n'otu ebe ọrụ.
Malite Iji Coggle Na-efu Taa!
Ngosipụta: Ana m etinye ego ntinye akwụkwọ maka Coggle n'ime ọkwa a.
Tags: nchọgharị dabeere mmekotacogglemmekotaIhe osiseesereseesereseoyiyi buliteuche obiuche nkewammekorita n'ịntanetị